कमेडियन भारती सिंह आमा बन्दै, कति वर्ष पुगिन् ? बधाईको ओईरो – Jagaran Nepal
कमेडियन भारती सिंह आमा बन्दै, कति वर्ष पुगिन् ? बधाईको ओईरो
Jagaran Nepal बिहिबार, चैत्र १०, २०७८
भारतीय कमेडियन भारती सिंह ३७ वर्षको उमेरमा आमा बन्न लागेकी छिन्। उनले यो समयको निकै रमाइलो गरिरहेकी छिन्।
हालै उनले पति हर्ष लिम्बाचियासँग फोटोसुट गराएकी छिन्। फोटोसुटमा भारती पेस्टेल स्काई रोजी कलरको रफल ड्रेसमा देखिएकी छिन्। यसै क्रममा हर्ष भारतीको बेबी बम्प समातेर क्यामेरामा पोज दिइरहेका छन्।
भारतीले यी तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै लेखेकी छन्,‘आउने बच्चाको आमा’ यो फोटोसुटलाई फ्यानदेखि लिएर सेलिब्रेटीसम्मले निकै मन पराइरहेका छन्। यसमा सबैले कमेन्ट गर्दै दुवैलाई शुभकामना दिइरहेका छन्।
भारतीले केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा हर्षले उनको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने खुलासा गरेकी थिइन्। यसबारे कुरा गर्दै भारतीले भनिन्, ‘हर्ष मेरो नर्सजस्तै हो। जब मेरो ढाड दुख्छ, उसले पानी तताएर मेरो ढाड थिच्छ। राती मलाई चना भटुरा वा दुग्धजन्य पदार्थ खान मन लागेमा। ती फूड एप्स जाँच्छन्। जसले होम डेलिभरी गर्न सक्छ। मलाई पनीर र दूध कहिल्यै मन पर्दैन, तर राती पनि खान मन लाग्छ।’
भारतीले सन् २०१७ मा लेखक हर्ष लिम्बाचियासँग विवाह गरेकी थिइन्। भारती हर्षभन्दा ७ वर्ष जेठी छिन्। करिब ७ वर्ष डेटिङ गरेपछि दुवैले एकअर्कालाई साथीको रुपमा रोजेका थिए। हर्षले ‘पीएम नरेन्द्र मोदी बायोपिक’का संवाद लेखेका छन्। यसबाहेक उनले फिल्म ‘मलंग’को टाइटल ट्र्याक पनि लेखेका छन्। दुवै अहिले रियालिटी शो ‘हुनरबाज’ होस्ट गरिरहेका छन्।